पर्यटनमन्त्रीलाई कसले देखायो अश्लील भिडियो ? - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
काठमाडौं, असार ९ : जेठ ३ गते विभिन्न बैंकका सूचनाप्रविधि विभाग हेर्ने प्रमुखसहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु ‘जुम मिटिङ’मा थिए । राष्ट्र बैंकले गरेको त्यो बैठकको उद्देश्य थियो, बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका बढ्दो प्रयोग र साइबर सुरक्षाका उपायहरुबारे छलफल गर्ने ।
सो वेबिनार (वेब बैठक) मा सहभागीमध्ये पहिलो वक्ताले बोलेपछि होस्टले दोस्रो सहभागीलाई बोल्न समय दिए, लगत्तै एकाएक पोर्न भिडियो बज्न सुरु भयो । कसले, कहाँ, कसरी त्यस्तो गर्‍यो ? कसैले ठम्याउन सकेनन् । अलमलमा परेका केही बैंकर तथा सूचनाप्रविधि विज्ञहरुले फटाफटी बैठक छाडे, ‘होस्ट’ले पनि छिटोछिटो मिटिङ ‘समाप्त’ गरे ।
भिडियोसँगै नेपाली भाषामा गरिएका अश्लील गाली पनि बजेको थियो ।
महिला वन प्रविधिकहरुलाई लाग्यो, कसैले नियतवस अपमान गर्न यस्तो अश्लील हर्कत गर्‍यो होला । घटनापछि महिला वन प्राविधिक सञ्जालले घटनालाई संस्थाको अस्तित्वमाथिको प्रहार मात्र नभई यौनजन्य दुव्र्यवहारका साथै समग्र मानवीय सभ्यताकै उपहासको संज्ञा दियो ।
सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई सहभागी कार्यक्रममा पनि अश्लील भिडियोको सोही सिलसिला दोहोरियो । कोभिड–१९को रोकथामका लागि पर्यटनसम्वद्ध निर्देशिका जारी गर्न ‘जुम’मा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा पनि अश्लील भिडियो बज्यो ।
‘ह्यारिस’ नामको अनाधिकृत आईडीबाट यस्तो भिडियो देखिएपछि मन्त्री संलग्न बैठक बीचैमा रोकियो । पर्यटनमन्त्री भट्टराई बोल्न थालेलगत्तै त्यस्तो घटना भएको थियो ।पर्यटन बोर्डले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्तो परिस्थितिमा आफूहरुलाई साथ दिन आग्रह गरेको छ ।
अहिले नेपालमा पनि कार्यालयहरुका नियमित बैठक, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयका अनलाइन कक्षाहका लागि पनि यही एपको प्रयोग भइरहेको छ । जसमा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । यसले गर्दा ‘जुम’को प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ ।
गत वैशाख २३ गते स्थानीय तहलाई पात्राचार गर्दै मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई जुमको लाइसेन्स लिन र त्यसलाई चलाउन सक्ने आधिकारिक व्यक्तिको विवरण पठाउन परिपत्र नै गरेको थियो । मन्त्रालयले परिपत्रमा विवरण उपलब्ध हुने लिंकसमेत राखेर सार्वजनिक गरेको थियो ।
विज्ञ कोइरालाका अनुसार जुम मिटिङ गर्दा र्‍यान्डम आईडी प्रयोग गर्नुपर्छ । जुमको पर्सनल आईडी सेयर गर्नुहुँदैन । ‘इनेबल पर्सनल मिटिङ आईडी’को प्रयोग गर्ने लगायत गरेमा जोखिम कम हुुन्छ । मिटिङ र क्लासरुमलाई प्राइभेट मोडमा राख्नुपर्छ र यसका लागि मिटिङको ‘पासवर्ड’ क्रिएट गर्नुपर्छ ।
च्याट बन्द गर्दा राम्रो हुन्छ, च्याटमार्फत मिटिङमा हुनसक्ने अनैतिक वा अवरोध गर्नेखालका कुरा हुन पाउँदैन । सहभागीको माइक्रोफोन अफ (म्युट) गर्न सकिन्छ । जो बोल्ने हो, उसलाई समय दिएपछि मात्रै ‘अनम्युट’ गर्न सकिन्छ । सहभागीलाई कुनै कुरा राख्नुपर्ने भएमा ‘रेज ह्यान्ड’ अप्सनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अनलाइनखबर